हिजो खोजी खोजी गि'रफ्तारी,आज मनमौज, सलामी र सवारी ! - Himali Patrika
हिजो खोजी खोजी गि’रफ्तारी,आज मनमौज, सलामी र सवारी !
हिमाली पत्रिका १८ बैशाख २०७८, 10:44 pm
यो तस्बिरमा गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी घनश्याम अर्यालले नयाँ मन्त्री दिपक मनाङ्गेलाई जय नेपालको सलाम हानेकोे देखिन्छ ।
मनाङ्गेलाई काठमाडौं प्रहरीले कुनैबेला व्यापक खोजी गरेको बेला त्यो टोलीमा यिनै अर्यालसमेत थिए । अहिले गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख बनेका उनी मनाङ्गेको खोजी गरिएको बेला काठमाडौं खोजीकर्ता थिए ।’
त्यतिबेलै दिपकले भनेका थिए ‘जसरी हामी गुण्डा प्रहरीसँग डराउँछौं,प्रहरी पनि नेतासँग त्यसैगरी डराउँछन् ।’अब उनी पदीय हिसाबले त्यहि प्रहरीका सबै खाले हाकिमको सलाम खाने स्थानमा पुगेका छन् ।
पटक पटक आफैँले जोखिम मोलेर पक्रिएका गुण्डा नाइकेलाई सलाम गर्नुपर्दा प्रहरी संगठनभित्रको मनोदशा के हुने होला ? हुन तः यसअघि पनि सर्वाधिक खोजी सूचीमा रहेका धेरै जनाले मन्त्री पद पड्काएपछि प्रहरीलाई त्यस्तै बाध्यता आइपरेको थियो । धन्न अहिले संघीय मन्त्रीमण्डलमा नभएर प्रदेशमा उनी सीमित छन् ।
दिपक मनाङे नेपालीहरुले धेरै समयदेखि सुन्दै आएको नाम हो, तर असल कारणले होइन । राजनीतिमा आउनुअघिसम्म उनी ‘गु’ण्डा’नाइके’ का रुपमा परिचित थिए ।
५० को दशकदेखि काठमाडौंको ठमेल केन्द्रित गतिविधिबाट उनी चर्चामा आएका हुन् । ०५०-५१ सालतिर उनी ठमेलका होटल-रेस्टुरेन्टहरुमा ह’प्ता असुली गर्थे । ठमेलका रेस्टुरेन्ट व्यवसायीबाट सलामी उठाउने क्रममा मनाङे पटक–पटक प’क्रा’उ परे र छुटे ।
गु’ण्डाग’र्दीका क्र’ममा बारम्बार प’क्रा’उ पर्ने र छुट्ने भएपछि मनाङेले राजनीतिक संरक्षणको खोजी गर्न थाले । त्यसक्रममा उनले अहिलेसम्म उनले चारवटा पार्टी चहा’र्न भ्याइसकेका छन् ।
२०६३ सालको परिवर्तन पछि लक्ष्मण था’रुले माओवादी छाडेर अलग मोर्चा बनाएसँगै मनाङे उनका पछि लागे । तर, लक्ष्मणसँगको सहकार्य पनि पाँच वर्षभन्दा बढी टिकेन । अन्तमा उनी एमालेको छत्रछायाँमा पुगेका थिए ।
मंसिरमा सम्पन्न प्रदेशको चुनावमा उनले एमालेबाट टिकट पाउन प्रयास गरेका थिए । तर नपाएपछि उनी स्वतन्त्र चुनाव ल’डे र जिते पनि । मनाङ प्रदेश सभा क्षेत्र ख बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमिा उनी विजयी भएका हुन् । सो क्षेत्रमा उनलाई नेकपा एमालेले समर्थन गरेको थियो ।